Programmable Leakage Current Tester သည် ၅ လက်မ TFT LCD Display ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်သူသည် 329-bit မြန်နှုန်းမြင့် MCU နှင့်အကြီးစားဒီဂျစ်တယ်တိုက်နယ်ဒီဇိုင်းကို9GB9706.1-2007 တွင်တည်ဆောက်ထားသည် (IEC60601-1: 1998) Body Impedance Simulation Network， Card MD Network Interface တွင် MD-A ပါရှိသည်။ GB / T12113-2003 နှင့် GB4793.1-2007)、 MD-B (GB / T12113-2003 Accord GB4793.1-2007、 GB4706.1-2005、 GB4943.1-2011、 GB8898-2011、 GB7000.1) -2015)、 MD-C (GB / T12113-2003 နှင့်အညီ、 GB7000.1-2015)、 MD-D (GB4793.1-2007 နှင့်အညီ)、 MD-E (GB4943.1-2011 နှင့်အညီ、 GB4793) ။ 1-2007)、 MD-F (GB7000.1-2015 နှင့်အညီ) oad တင်ပို့ခြင်းနှင့်လက်ရှိရေအလွန်အကျွံကာကွယ်မှု။ MD Network အမြန်အကာအကွယ်၊ လုံခြုံစိတ်ချရသော။ Dynamic နှင့် Static Power Supply Test States; ယိုစိမ့်သောလက်ရှိစမ်းသပ်မှုသည် L (Phase Line) နှင့် N (သုညလိုင်း) ကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းသည်။ ၎င်းသည် Setting နှင့် Operation သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး PLC Remote Control Interface ကိုပေးသည်။ RS232C, RS485, USB နှင့်အခြား Interfaces, အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပြည့်စုံသော Test System သို့လျင်မြန်စွာပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်သုံးကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်အပူပေးစက်များနှင့်အခြားကုန်ပစ္စည်းများအားလက်ရှိယိုစိမ့်စေသောစမ်းသပ်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
၁။ ၅ လက်မ TFT ကျယ်ပြန့်သောမျက်နှာပြင် (၄၈၀ × ၂၇၂) ကိုမျက်လုံးဖမ်းခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်မှုများနှင့်အတူချိန်ညှိချက်များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများကိုပါပြသရန်အသုံးပြုသည်။
၂။ Front Panel တွင် USB Interface ရှိပြီးဖိုင်များကိုကူးယူနိုင်သည်။
Back Panel တွင် USB Interface ရှိပြီး USB မှတစ်ဆင့် Software ကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။
4. ယိုစိမ့်မှုလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကွန်ယက် GB9706.1-2007 စမ်းသပ်မှုများ (IEC60601-1: 1998);
၆။ PLC Interface၊ RS232 Interface၊ RS485 Interface၊ Optional Host Computer Software ၏ ၆.၃ Configuration၊
၇။ တရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်စာမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သောကြောင့်အသုံးပြုသူအမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
(၈) 16M Flash တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ရှေ့သို့ RK2811D ဒီဂျစ်တယ်လျှပ်စစ်တံတား
နောက်တစ်ခု: RK9940N / RK9980N / RK9813N အသိဉာဏ်ပါဝါမီတာ
မော်ဒယ် RK9950 （Passive） RK9950A （500VA） RK9950B （1000VA） RK9950C
အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ၅ လက်မ TFT LCD မျက်နှာပြင်
နံပါတ်ကီး ဒီဂျစ်တယ် Input ကိုချိန်ညှိခြင်း
Coding ပြောင်းလဲခြင်း Parameter ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုချက်ရာထူး
Up, Down, Left နှင့်ညာ
Function သော့များ Up ကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့် Down ရွေးချယ်ရေး function ကို Parameter
သော့ခတ်သော့ခတ်သော့ခတ် Function စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ၏မတော်တဆပြုပြင်မွမ်းမံဒါမှမဟုတ်စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ၏ပြုပြင်မွမ်းမံတားမြစ်ထား
ဆက်သွယ်ရေးမျက်နှာပြင် RS232C、 RS485、 USB
USB interface ကူးယူခြင်း၊ ကူးယူခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ
Control Interface Handler (PLC)
စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်း dynamic, static
တင်ဗို့အား （AC） Range 0-300V
တိကျမှန်ကန်မှု + (2% ×ဖော်ပြသောတန်ဖိုး + 0.5V)
ကြိမ်နှုန်း 50 / 60Hz
လက်ရှိစီးကြောင်း （AC） အများဆုံး 25A
လက်ရှိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကျော် အသံနှင့်အလင်းနှိုးစက်၊ ဝန်ထုတ်ကုန်ကိုဖြတ်တောက်ပါ
resolution ＜10mA， 0.001 / အဆင့်＞ 10mA， 0.01mA / အဆင့်
ရှင်းလင်းချက် အနိမ့်ကန့်သတ်မှုမရှိဘဲ0င်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်
ယိုစိမ့်လက်ရှိအတိုင်းအတာ အကွာအဝေးနှင့်တိကျမှန်ကန်မှု 0.001-0.050mA, DC-10KHz ± (၅% ×ဖော်ပြချက်တန်ဖိုး + ၅ စကားလုံး)
0.050-20.00mA, DC-10KHz ± (၂% ×ဖော်ပြမှုတန်ဖိုး + ၂ စကား)
0.050-20.00mA 10KHz -1MHz ± (၅% ×ဖော်ပြချက်တန်ဖိုး + ၅ စကားလုံး)
MD Simulated Human Network ၈ စံကွန်ရက်များ MD-A (GB / T12113-2003、 GB4793.1-2007)、 MD-B B1 (GB / T12113-2003、 GB4793.1-2007、 GB4706.1-2005、 GB4943.1-2011、 GB8898-2011、) GB7000.1-2015)、 MD-C (GB / T12113-2003、 GB7000.1-2015)、 MD-D （GB4793.1-2007）、 MD-E （GB4943.1-2011、 GB4793.1-2007 ）、 MD-F (IEC60598-1: 2014、 GB4793.1-2007)、 MD-G (GB4943.1-2011、 IEC60950-1: 2005、 GB4793.1-2007、 IEC61010-1: 2001)
စမ်းသပ်ချိန် Range တစ်ခုတည်းအချိန်ဇယားစမ်းသပ်မှု: 0.1-999s ± 1%; အချိန်ပိတ်ခြင်းသည်အဆက်မပြတ်စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်
ရှင်းလင်းချက် 0S Test ချိန်ညှိသည့်အခါ N-Wire သာလျှင်စမ်းသပ်သည်။ L L ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ
Output ပါဝါ passive 500VA 1000VA သုံးအဆင့် Passive
ပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့ရေး ပြင်ပဆက်သွယ်မှု Built In Built In ပြင်ပဆက်သွယ်မှု
အလုပ်လုပ်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆ0℃ -40 ℃ ，， 75% RH
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 100V-121V， 198V-242V， 47.5-63Hz 5A 250V
ဖျူးအရွယ်အစား 5A 250V 10A 110V
ပြင်ပ volume (D × H × W) 430mm × 105mm × 350mm
အလေးချိန် 13KG 16KG 18KG 14KG
ပုံစံ ပုံ အမျိုးအစား အကျဉ်းချုပ်
RK995001 စံ သီးခြား ၀ ယ်ယူနိုင်သည့်စံပါဝါကြိုးနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
RK20K စံ သီးခြား ၀ ယ်ယူနိုင်သည့်စံဒေတာကေဘယ်လ်နှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
RK00001 စံ သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သည့် Standard Power Cord တပ်ဆင်ထားသည်။
လက်မှတ်အာမခံကဒ် စံ တူရိယာစံလက်မှတ်နှင့်အာမခံကဒ်။
စက်ရုံစံကိုက်ညှိလက်မှတ် စံ တူရိယာစံထုတ်ကုန်များ၏စံကိုက်ညှိ။
ညွှန်ကြားချက်များ စံ အဆိုပါတူရိယာစံထုတ်ကုန်များ၏စစ်ဆင်ရေးလက်စွဲစာအုပ်။
Led Digital Display နှင့်အတူ Rk2675wm
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Shenzhen Meiruike Electronic Technology Co. , Ltd. Featured ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, မြင့်မားသောဗို့အားစံကိုက်ညှိမီတာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြင့်ဗို့အားမီတာ, High-Voltage ဒီဂျစ်တယ်မီတာ, 1000v- 40kv ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာ, မြင့်မားသောဗို့အားမီတာ, ဗို့အားမီတာ, ထုတ်ကုန်အားလုံး